देविस्थान राहालेको मन्दीरमा अनौठो सर्प बस्न थालेपछि हेर्ने र पुजा गर्नेको भीड ! – ebaglung.com
देविस्थान राहालेको मन्दीरमा अनौठो सर्प बस्न थालेपछि हेर्ने र पुजा गर्नेको भीड !
२०७४ फाल्गुन ८, मंगलवार १६:३९	Top News, अन्य समाचार
साजन परियार, पर्वत २०७४ फागुन ८ । पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका ६ देविस्थान राहाले स्थित मन्दिरमा शिव, पार्वती,गणेश र हनुमानको मुर्ति छ । मुर्तिमा एउटा अनौटो सर्प बस्न थालेको छ । करिब २ बर्षदेखी दैनिक अनौठो सर्प बस्न थालेपछि सर्प हेर्ने र पुजा गर्नेको भीड लाग्न थालेको छ ।
सर्पले मानिस हेर्न जाँदा अनौठो प्रतिक्रया देखाउने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । सर्पको सुरक्षाका लागि मुर्ति नजिक सरसफाई गरिएको छ भने दुध, फलफुल राखिएको छ । सेतो र करिव दुई फुट लम्वाई भएको पुच्छर काट्टिएको सर्प देखेपछि साक्षत् शिव भगवान प्रकट भएको भन्दै दर्शन गर्ने आउनेहरुको भिड लागेको छ । टाउँकोमा टिका र शरीरमा पहँलो धर्का भएको सेतो रंङको सर्प दैनिक देखिन थालेपछि टाढा–टाढावाट नाग देउताको दर्शन गर्ने भन्दै श्रद्धालुहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । नियमित सर्प देखिन थालेपछि स्थानीयले दैनिक धुप बाल्ने, दुध खुवाउने र पैसा दान गर्ने गरेका छन् । दोविल्ला हुँदै फलेवास ढिक सडक खण्डमा आवतजावत गर्ने यात्रीहरुले समेत अनौठो मानी सर्प हेर्न र पूजा गर्ने गरेका छन् ।
स्थानिय नारायण श्रेष्ठले दैनिक सर्पले सोही स्थान बाहेक भागेर अन्त नजाने गरेको बताए । अनौठो सर्प र अनौठो बानीले सर्पको पुजा गर्ने मानिसहरु आउने गरेको उनको भनाई छ ।
विहान देखी बेलुका सम्म मुर्ति नजिक नाग बस्न थाललेपछि धार्मिक विश्वासका कारण नागलाई पुजा गर्ने आउने भक्तजनको संख्या बढेको स्थानिय शिव कुवँरले बताए । उनका अनुसार सर्पले नजिक गएर छुँदा समेत केही नगर्ने बताए ।
बागलुङ बजारको पुरानो बसपार्क नजिक भेटिएको बम नेपाली सेनाको टोलीव्दारा निष्कृय !